मस्कोमा 8 सर्वश्रेष्ठ पानारामिक साइटहरू
Panneraa शहर *
NEVOTEL मस्को शहर *
TISIMPH PALLE *
AZimut होटल धूम्रपान *
Hyatt Reegneni मस्कोस्कूल पेट्रोभस्की पार्क *
सिटी सेन्टरको विलासी विकल्प। डाईजिंग दूरीमा रूस शिल्प क्याथरिन दोस्रो, रेड स्प्रिन क्याथरिन द्वन्द्व, उपचार ग्यालरी, क्रिस्टोक्कोव ग्यालरी, TSaritsono को सम्पत्ति को सम्पत्ति। कलाको कोठाको कोठाबाट शहरका दृश्यहरू शहरका विचारहरू।
लिबरको लबी पट्टीमा, तपाईं चिया, कफी कच्चा, ककटेलमा प्रतिलिपि अधिकारको लागि कन्ट्री डेटर्टहरू पिउन सक्नुहुन्छ। Acaplapa रेस्टुरेन्टले शेफ IVAN VELLABLOV बाट रूसी र यूरोपीयन घडीलाई पार गर्दछ। मुख्य हाइलाइट एक पानारामिक पट्टी पानामिक पट्टी "शहर अन्तरिक्ष" हो, जहाँ मूल ककटेल र स्नैक्स अर्डर गर्न लायक छ।
<< p> पाहुनाहरूको लागि जो प्रशिक्षण छैन, एक आधुनिक फिटनेस केन्द्र घडी वरिपरि काम गर्दैछ। जिममा, कार्डिलोजिकल र पावर सिमुलेटरहरू। त्यहाँ चित्रहरू, योग र नृत्यको कक्षाहरू छन्। व्यस्त दिन पछि, स्पा केन्द्रमा हेरिन लायक छ।
यहाँ पौडी खेल्ने पोखरी, तातो ट्यूब, जामुजी, सौना र मसाज कोठाहरू छन्। आराधना र पुन: प्राप्तिको लागि पाहुना धेरै कार्यक्रमहरू छनौट गर्न। छालाको अनुहार र शरीरको हेरचाह गर्न, सौन्दर्य प्रसाधन को कर्पोरेट लाइन प्रयोग गरीन्छ। व्यवसाय यात्रीहरू, सम्मेलनका लागि सुसज्जित कोठा। त्यहाँ भोज हलहरू पनि छन् जहाँ कुनै उत्सव व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
पूँजीसँग परिचित हुन उत्तम तरिकाहरू मध्ये एकको एक मध्ये एक - उनलाई उचाईबाट नहेर्नुहोस्, मस्कोको पानामिक दृश्यका साथ यत्तिको होटलले पर्यटकहरूसँगै लोकप्रिय छ। होटलहरूको बारेमा जान्नुहोस् जुन विन्डोजबाट हजरको जस्तो देखिन्छ!
मस्को-शहर केन्द्र सेन्टरको हाइलाइटमा होटेल शहरमा एक उत्तम परियार होटेल मध्ये एक मानिन्छ। 48 48 औं फ्लोरमा सबै कोठाबाट, आधा राजधानीमा - घुडा उपत्यका, सरकारी घर र पुरानो हाइलाइटहरू। त्यहाँ उत्कृष्ट सेवा छ, त्यहाँ एक ठूलो मेनू चयन संग नि: शुल्क पार्किंग र रेस्टुरेन्टहरू छन्। शपिंग केन्द्रहरू, मस्को विश्वविद्यालय र चिडियाखानाको निकटता जस्ता पर्यटकहरू। 1,000000 रूबलबाट डबल कोठा लागत। कोठामा नास्ताको खाजाले 59000 रूबलहरू खर्च गर्दछ।
स्टाइलिश भवन आधुनिक संचारको साथ स्टाइलिश भवनले तपाईंलाई सान्त्वनाका साथ आराम गर्न र सफलतापूर्वक व्यापार वार्ता आयोजना गर्न अनुमति दिन्छ। होटल "मस्को शहर" मा अवस्थित छ, र पनारामिक विन्डोजबाट तपाईं शहर को सम्पूर्ण केन्द्र देख्न सक्नुहुन्छ। पाहुनाहरू सौण, हम्मम र मसाज क्याबिनेटमा आराम गर्न पाउँदा खुशी छन्। डबल कोठा 78 780000 रूबलबाट लागत।
मस्कोको परिश्रमको साथ एक असामान्य धारणाले उच्च युरोप गोस वाय्यूबरको तीन माथिल्लो फ्लोरहरू लिन्छ। कोठाको एक व्यक्तिगत डिजाइन छ र सुसज्जित छ कि तपाईं ओछ्यानबाट वा बाथरूमबाट सुन्दर शहर दायाँको प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ। मूल प्रकाश फोटोको टुप्पोको लागि उपयुक्त छ, र रात्रिलो बत्तीहरू रोमान्टिक डिनरको लागि उत्कृष्ट पृष्ठभूमि हुन सक्छ। 55 strands बाट, राजधानी उत्कृष्ट देखिन्छ! डबल कोठा77700 रूबलबाट लागत।
एक ठूलो बगैंचाको सडकको उचाई आधा शताब्दी भन्दा बढी फैलाउँछ। कोठाको उच्च स्तम्भहरू, क्लासिक शैली समाप्त र एन्टिक डिनर छ। पैदल दूरीमा, राजधानीको सर्वश्रेष्ठ किटर र रेस्टुरेन्टहरू। वायुमंडलीय होटल होटल मेनकागोकाया मेट्रो स्टेशन विपरीत खडा छ, त्यसैले तपाईं सजिलैसँग क्र्यार्ममा पुग्न सक्नुहुनेछ। डबल कोठा 32200 रूबलबाट खर्च गर्दछ।
"AZimuuth" - "मस्को शहर" र नदीको तटबन्धका साथ पानामिक दृश्यका एक उत्तम होटेलहरू। सुन्दर2- स्टोरली होल्टले अर्बतको नजिकको ऐतिहासिक आधुनिक भवन कब्जा गर्छ। अतिथिहरूले एक ठूलो ओछ्यानमाको साथ आरामदायी अपार्टमेन्टहरू आनन्द लिन सक्छन्, एक कम्प्युटर टेबल र एक किचन डबल कोठा 44400 रूबलबाट लागत।
मस्कोको परिष्कृत होटेलको साथ फैशनेबल होटल क्रारालिन नजिकै अवस्थित छ। जैतुन इन्टरियसहरू र बाथहरू जेकजीजसँग स्नानसेटहरूको पूरक पूरै सम्पर्कमा छन् जुन तपाईं पर्दा र प्रकाश नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। क्रालीन शहरहरू छानामा चम्कने टेरेसबाट देखिन्छन्। तपाईं पमानियन गेसिन नोभिकाभको अनन्य रेस्टुरेन्टमा खान सक्नुहुन्छ।2000,000 रूबलबाट डबल कोठा लागत।
होटेल प्रीमियम स्तरबाट मस्को प्रशंसा गर्नुहोस्! रेमोन मेट्रो स्टेशनको नजिक मनोरञ्जनको लागि विलासी होटल सान्त्वनाको उच्च स्तर प्रदान गर्दछ। भित्ताहरूमा उज्ज्वल लुटी कोठाहरू, भित्तामा उज्यालो चित्रहरू, भित्ता सम्पदा, रेस्टुरेन्ट सम्पदा, रेस्टुरेन्ट सम्पदा, रेभ्याजा क्याफेले प्रोफेले वेश्यालाई सुन्दर कफी र सुन्दर कफी। डबल कोठा 11,200 रूबलबाट लागत।
कुनै राम्रो ठाउँ मस्को kamblin को sununing आर्किट्रन्ट काउन्टेज़ाई सामिल को आनन्द लिन को लागी। यो एक चिन्ह हो, पूर्ण पुनर्स्थापना पछि, मस्कोको लागि क्रान्तिकारी को एक विस्तृत चयन आश्चर्यचकित छ। रूसी कारवान चियाको मिश्रण र चेरीबाट कम्तीमा "रूसी कटु" को टिन्चर लगातार सिफारिस गरिरहन्छ। धेरै महँगो, तर Kamrambin को उपस्थिति।
विश्वमा सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा मात्र रूसी रेस्टुरेन्ट: विश्वको 500 सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्टहरूको सूचीमा ठाउँ। विदेशीहरू यहाँ फोटो खिच्न आउँदछन् र चाखलाग्दो सेटहरू छन्, संरक्षक रूसी खसेको छ - प्रकाश र टेक्नोलोजिकल।
मस्कोको उच्च रेस्टुरेन्ट मस्को शहरको महादेश टावरको 622 औंलामा अवस्थित छ। एक लत उचाई मानव निर्मित परिदृश्यका लागि क्षतिपूर्ति दिन्छ। एक पूरै धिक्कार जस्तै चिन्तनबाट विचलित हुँदैन: इटाली र जापान - हामीले प्रेम गर्ने सबै कुरा।
debods500 मा 30500 रूबलहरू;
रक्सी:2900देखि 99 9900 रूबलहरू;
वाइन: 90 4400 देखि 34 346,000 देखि 34 346,000 देखि। (बोतलको लागि)। / LI>
मस्को लगातार सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्टहरूसँग विश्वका सहरहरूको सूचीमा समावेश छ। राजधानीमा उच्च भान्साको परम्परा एक शताब्दी पुरानो ईतिहास छ। यद्यपि, पानारामिक रेस्टुरेन्टहरू जसमा तपाईं खाजा खान सक्नुहुन्छ वा खाना खान सक्नुहुन्छ, एकै समयमा विन्डो बाहिरका सुन्दर दृश्य प्रशंसा गर्दै, यति धेरै छैन।
<< p> यो महत्त्वपूर्ण छ कि पनोरामिक समीक्षा उच्च-गुणवत्ता भान्छा र राम्रो सेवाको प्रतिस्थापन होईन। यी सबै तत्वहरू सद्भावको सद्भाव हुनुपर्दछ।
रेस्टुरेन्ट, जुन मस्कोमा मात्र होइन एक उत्तम मानिन्छ, तर युरोपमा पनि। स्थापनाको स्थापना मस्को शहर जटिल फेडरेशन ग्रोसको गलामा फाउन्ड्रक्डरमा अवस्थित छ।2235 मिटरको उचाईबाट, एक लुप्तकिट दृश्य खुल्छ: मेगापोलिस यहाँबाट हजुरजस्तै देखिन्छन्। आगन्तुकहरू "साठ "ले अविश्वसनीय पानिरामा प्रशंसा गर्न सक्छ, कडाई र फोटोग्राफहरू गर्नुहोस्।
रेस्टुरेन्ट हल असामान्य शैलीमा सजाइएको छ जुन हाई-टेक र वातावरणीय दिशाको तत्वहरू संयोजन गर्दछ, फिल्म "अवतार" बाध्य पार्दछ। साठ हजारौं महानगरीय मोड, हिपस्टरको, "ताराहरू" बीचको महान लोकप्रियता हो। साधारण स्थान, आरामदायी वातावरण, मूल डिजाइन, उत्कृष्ट conise, उत्कृष्ट chisine र उत्कृष्ट chisine र उत्कृष्ट cerisine र उत्कृष्ट सेवा को कारण प्राप्त गर्न sefty प्राप्त
रेस्टुरेन्टको कोठामा धेरै स्थानहरूको उपस्थिति "साठ" "साठ्ठी" संस्थालाई सार्वभौम बनाउँदछ। यहाँ तपाईं एक युवा पार्टी समात्न सक्नुहुन्छ, एक कर्पोरेट छुट्टी वा एक व्यापार बैठक। "साठ्ठी" सम्पूर्ण परिवारको कम्पनीमा प्रेमीहरूको बैठकको लागि उत्तम ठाउँ हुनेछ।
प्रत्यक्ष संगीत संगीत आउट हुन्छ: प्लेलिस्टले फेसनल मेट्रोपोलिटन डीज द्वारा जवाफ दिईन्छ। साठ्ठा मद्यको सूचीले एक उत्कृष्ट यूरोपियन सोममिल बी नाकीको विकास गरेको छ। रेस्टुरेन्ट लीटरहरू दीर्घकालीन प्रशिक्षण हो: ग्राहकहरूले राम्पिडो र विनम्र सेवामा भरोसा गर्न सक्दछन् जुन उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दछ।
तथापि, रेस्टुरेन्टको मुख्य फाइदा, "settyty" को मुख्य फाइदा हो, यसको भव्य भान्छा। भाँडाको तयारी त्रिकोणको प्रख्यात फ्रान्सेलीको मार्गनिर्देशनको लागि अत्यधिक व्यावसायिक कुकहरूको टोलीमा संलग्न छ। यो चियोफ फ्रान्स र स्विजरल्याण्डको सबै भन्दा राम्रो स्थायितामा काम गर्यो, के K. LERUA, D. DSSO र D. Busho साथ सहयोगको अनुभव
रेस्टुरेन्टको शीर्षकमा, रेस्टुरेन्टको शीर्षकमा, यो संयोगले होइन कि शब्द "ठाउँ" हो: बाह्य रूपमा एक उडान प्लेटलाई याद दिलाउँदछ। स्थापनाको स्थापना 1 14400 एम भन्दा बढीको उचाइमा -4 34-भण्डारणको कौसीमा अवस्थित छ। घुमाइएको गिलास पर्खालहरू भवनको पछाडि जारी गरिएको छ, जसले पानिरामा विशेष आकर्षण दिन्छ।
शहर स्पेस रेस्टुरेन्ट टेबलहरू सर्कलमा स्थापना गरिएको छ, समीक्षा 36 3600 ° हो। आगन्तुकहरू मस्कोको केन्द्रलाई बेवास्ता गर्छन्, मस्को-शहरको टावर, मस्को राज्य विश्वविद्यालयको उचाईको उचाइ। क्लासिक शैलीमा लुक्ने लोन्ज पूर्ण रूपमा जितको छ।
केवल आगन्तुकहरू होइन, तर धेरै मस्कोविट्स, तर धेरै मस्कोविट्स, तर धेरै मस्कोभिस टावरहरू हेर्छन्, फेरि कसरी बाँच्ने भनेर बारम्बार सोच्दछन्, विन्डोबाट पानामोराहरूमा रमाइलो गर्दै।
अपार्टमेन्ट भाडाको मूल्य, यहाँ रियल इस्टेट खरीद उल्लेख छैन, रसियाहरूको विशाल बहुमतको लागि विस्तार गरिएको छ। तर त्यहाँ धेरै दिनसम्म लक्जरी गलामा सकीचामा बसोबास गर्ने अवसर छ। मस्को शहर मा सबै भन्दा राम्रो होटल विचार गर्नुहोस्।